चिनियाँ वैज्ञानिकद्वारा सौर्य रेडियो स्पेक्ट्रम अवलोकन प्रणाली विकास
चिनियाँ अनुसन्धानकर्ताहरूले सूर्यको बाहिरी भागको फुटेको क्षेत्रमा रहेको चुम्बकीय अवस्थाका बारेमा अनुपम जानकारी दिन मिलिमिटर तरङ्गगयुक्त सौर्य रेडियो स्पेक्ट्रम अवलोकन प्रणालीको विकास गरेका बुधबार चाइना साइन्स डेल...
भ्यालेन्टाइन्स डेको अघिल्लो दिन आकाशमा देखिनेछ यस्तो अचम्मको दृश्य, घरको छतबाट पनि हेर्न सकिने
अन्तरिक्षको संसार धेरै सुन्दर र रोमाञ्चक हुन्छ । समय-समयमा अन्तरिक्षमा यस्ता कुराहरू देख्न पाइन्छ जुन अचम्मका हुन्छन् । हाम्रो पृथ्वी जस्तै अन्तरिक्षमा पनि अनगिन्ती ग्रह, उपग्रह, ताराहरू छन् । यसै...
विश्वास गर्नुहुन्छ ? बच्चाको सट्टा रोबोट स्कुल जान्छ
प्रविधिको विकासका कारण मानव जीवन सहज भएको छ । सबैभन्दा कठिन कार्यहरू छिनभरमै पूरा हुन्छन् । अचेल तपाईंको स्मार्टफोनमा सबै कुरा नियन्त्रण र पहुँच गरिन्छ । टेक्नोलोजी यति धेरै विकसित भएको छ कि तपाईं टा...
लामो समयदेखि क्षुद्रग्रह अर्थात् एस्टेरोइडलाई पृथ्वीका लागि खतरा मानिन्छ । वैज्ञानिकहरुका अनुसार यदि उक्त क्षुद्रग्रह पृथ्वीसँग ठोक्कियो भने ठूलो विपत्ति आउन सक्छ । भनिन्छ, एक पटक ठूला क्षुद्रग्रह पृथ्वीसँग ठोक्...
चलचित्रमा एलियन्स आएजस्तै आकाशबाट आयो चम्किलो प्रकाश, के यूएफओले चक्कर लगाएको हो ?
एलियनको अस्तित्वलाई लिएर विश्वभर बहस चलिरहेको छ । वैज्ञानिकहरूले एलियनहरू वास्तवमै छन् कि छैनन् भनेर पनि अनुसन्धान गरिरहेका छन् । विश्वभर एलियन्स र यूएफओका बारेमा विभिन्न दाबी गरिन्छ तर केही समययत...
बच्चाको सट्टा स्कूल जान्छ रोबोट, छाड्दैन कुनै कक्षा
प्रविधिको विकासका कारण मानव जीवन सहज भएको छ । सबैभन्दा कठिन कार्यहरू छिनभरमै पूरा हुन्छन् । अचेल तपाईंको स्मार्टफोनमा सबै कुरा नियन्त्रण र पहुँच गरिन्छ । टेक्नोलोजी यति धेरै विकसित भएको छ कि तपा...